FSX र तपाईं
प्रश्न FSX र तपाईं
2 वर्ष4महिना पहिले #66 by Gh0stRider203
के राम्रो तरिका हामी FSX के छलफल गर्न भन्दा एक अर्को चिन्न गर्न, सही?
मात्र2नियम। कुनै बहस (यदि त्यहाँ एक समस्या ठाउँमा लिन, कृपया); र अरूको कुनै बनाउने मजा Rikoooo साइट मा विमान जोडिन्छ मात्र प्रोत्साहन छैन, म तिनीहरूलाई स्वागत! म विभिन्न विमान चलाइ मन! म एक बच्चा थियो देखि छ।
आफूलाई लागि जाँदा ....... म अमेरिकी एयरवेज VA को सीईओ छु। म कि एयरलाइन सबैभन्दा पैसा बनाउँछ के लामो-हउल कार्गो गर्दै मेरो समय FSX मा अधिकांश खर्च। म उड शीर्ष2चरा को 747-800F र 747LCF छन्। हामी विभिन्न आकार को हुनत एक ठूलो छिटो छ गर्छन्।
सानो मलाई लाग्छ यो ड्यास 8-100 र Embraer पैतृक 600 छ।
सबै भन्दा ठूलो मैले हुनेछ 747s र 707-320 र 777-200LR हुन लाग्छ।
सबैभन्दा पुरानो भएको Boeing 314 र 707-320 हुनेछ
सबैभन्दा छिटो प्रश्न बिना कनकर्ड हुनेछ। (व्याख्या गर्न "चार्ली", म छु "आनन्दित हुन जाँदै छैन नभएसम्म [म छु] जाँदै मच-2 संग [मेरो] आगो बाल" योग्य)
(को osprey हे प्रयोग भने साँच्चै बोरिंग, तर छिटो) भन्दा ढिलो हामी मात्र तेल रिग कार्यकर्ता उडान गर्ने योजना बाहिर लागि प्रयोग जो प्रश्न वी-22, र दर्पण-47, बिना छ
मेरो व्यक्तिगत मनपर्ने? एक कठिन एक हो। म 707-320 र सी-130 भन्न हुनेछ।
म कति उड गर्छन्? खैर, इमानदार .... लगभग गैर-स्टप हुन। हालसम्म यो महिना, म 461.39 बजे लग गर्नुभएको छ, र 206,931
एयरलाइन लागि उडान छैन, म सामान्यतया Tomcat उडान गरिनेछ।
म प्रयोग Rikoooo चरा केही गर्न केही लिंक
B747-XXX मेगा प्याकेज (म यो बाट LCF प्रयोग - म सबै 747 megapacks lol स्थापित हुनत)
या यदि तपाईं मात्र LCF चाहनुहुन्छ ...
B737-700 अमेरिकी एयरलाइन्स (हाल हाम्रो छिटो तर म यसलाई र आईटी प्रेम गर्छन्)
B777-200 (गर्दा म यो प्याकमा व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि प्रयोग नगर्नुहोस् .... म यो अत्यधिक सिफारिस नगर्नुहोस्!)
B707-42 (म कप्तान सिम संस्करण प्रयोग गर्नुहुन्छ, तर यो हप्ता बाहिर यो प्रयास गरिनेछ! रहनुहोस् एक समीक्षाको लागि रूपबाट!)
2 वर्ष4महिना पहिले -2वर्ष4महिना पहिले #69 by Dariussssss
म केही कुराहरू सोध्न चाहन्छु। पहिलो वास्तवमा म सिम दिग्गज Gran Canaria दृश्यहरु स्थापना गर्न प्रयास पछि अप देखाउँछ त्रुटि छ। त्रुटि सीनरी क्षेत्र (केही नम्बर) फेला परेन छ। त्यो दृश्यहरु फाइल मेरो FSX sp2 मा सबै काम गर्दैन। यसलाई हटाइएको तर त्रुटि अझै पनि छ।
दोस्रो। यो पनि A320 परिवार बहु-livery प्याक देखि कुलपति मर्ज गर्न थोमस रूथ A330 / 340 र कसरी संग सम्भव छ? दुवै यहाँ बाट डाउनलोड।
2 वर्ष4महिना पहिले #72 by rikoooo
तपाईं Gh0stRider203 धन्यवाद पोस्ट लागि, हामी तपाईँलाई एउटा बिट थप अब थाहा छ, र मंच मा एक मध्यस्थकर्ता रूपमा स्वागत गर्दछौं।
Dariusssss: त्रुटि हटाउन तपाईं बस FSX कन्फिग तपाईंको दृश्यहरु पुस्तकालयमा दृश्यहरु हटाउन छ। म त्यहाँ स्थापनाकर्ता त्रुटि छ भने जाँच गर्न दृश्यहरु गर्न एक नजर हुनेछ। यो केवल ग्रैंड क्यानरी वा अन्य sceneries पनि साथ भइरहेको छ?
आफ्नो दोस्रो प्रश्न लागि, हाँ म, को A320 परिवार बहु-livery प्याक देखि कुलपति मर्ज गर्न सक्नुहुन्छ थोमस रूथ A330 / 340 संग लाग्छ। एक कुलपति मर्ज कृपया Google वा YouTube ट्यूटोरियल संग जाँच गर्न
2 वर्ष4महिना पहिले #73 by Dariussssss
यसको लागि दृश्यहरु क्षेत्रमा 117 र 123 देख गर्नुपर्छ। दुवै त्यहाँ छैनन्। scenery.cfg मा, पछिल्लो दृश्यहरु क्षेत्र यो सबै त्यहाँ छैन, छ सीनरी मा 115-थप्नुहोस्, तर त्रुटि आ मा राख्छ। त्यो त टाढा मात्र दृश्यहरु फाइल समस्या बनाउँछ भन्ने छ।
साथै, FSX लागि BN-2 आइल्यान्डर नराम्ररी भङ्ग भएको छ।
2 वर्ष4महिना पहिले #95 by Dariussssss
को उल्लेख कुलपति र थोमस रूथ A330 मर्ज गर्न प्रयास पछि, परिणाम राम्रो खराब थियो। म यसलाई नराम्ररी भङ्ग भएको थियो, A330s एक हटाउन थियो। म यसलाई गर्न कुनै पनि बाटो खोज्न सक्दैन मर्ज गर्न विचार को यू दिन चाहन्न तर।
2 वर्ष4महिना पहिले #97 by Gh0stRider203
Dariussssss यस्तो लेखे: को उल्लेख कुलपति र थोमस रूथ A330 मर्ज गर्न प्रयास पछि, परिणाम राम्रो खराब थियो। म यसलाई नराम्ररी भङ्ग भएको थियो, A330s एक हटाउन थियो। म यसलाई गर्न कुनै पनि बाटो खोज्न सक्दैन मर्ज गर्न विचार को यू दिन चाहन्न तर।
मान्छे यहाँ मेरो मुद्दा derailing c'mon..you're
टेक probs यहाँ हो: www.rikoooo.com/board?view=topic&catid=5&id=34
2 वर्ष4महिना पहिले #99 by Dariussssss
ठीक माफ गर्नुहोस्, मेरो खराब।
2 वर्ष4महिना पहिले #130 by Gh0stRider203
Dariussssss यस्तो लेखे: ठीक माफ गर्नुहोस्, मेरो खराब।
कुनै मेरो मानिस, म विमानहरु प्रशस्त तपाईं धुन गर्न सक्छन् र मोम पायो चिन्ता lol
2 वर्ष4महिना पहिले #177 by FCAIR
नमस्कार सबै, म एक सेवानिवृत्त USAF चालक दल मुख्य छु / म चटाई उर्फ ​​सैन्य एयर परिवहन सेवा / C97 टाढा मेरो मनपर्ने विमान हो मुख्य रूप उड। म पनि अलास्का मार्फत Reeve एए उडानहरू र एलेउटियन द्वीप भएको लकहीड एल-I88 Electra टाढा उत्तरी ठूलो मा टाढा मेरो मनपर्ने विमान द्वारा छ उड। म Convair को सुपर प्रशंसक हुँ बी-36, बी-58 Hustler सर्वश्रेष्ठ देख उड गर्न कहिल्यै बमवर्षक / र व्यावसायिक 880 / 990 सुन्दर छिटो airliners। म राम्रो मूल्य मूल्य को Capsim 707 र 727 उत्कृष्ट एडअनहरू उड गर्छन्। म मात्र हालसम्म अझै पनि सिक्दै र अभ्यास सबै समय नजिकिंदै सिम बारे 80 घण्टा छ ..
नीलो आकाश ..
2 वर्ष4महिना पहिले #183 by Gh0stRider203
पहिलो बन्द FCAIR .... हाम्रो देश आफ्नो सेवा धन्यवाद। मेरो परिवार, तर तटरक्षक बस बारेमा हरेक शाखा, अब6पुस्तामा सेवा छ। कुनै शब्द कहिल्यै साँच्चै तपाईं मेरो कृतज्ञता व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। म सेवा गर्न चाहन्थे तर दुःखको कुरा, नागरिक एयर Patrol (म अन्त हे सम्ममा आनन्द जो) सीमित भएको थियो।
म पनि सीएस 707 पायो र उनको माया गर्छन्। एर अप 'शुरू म अझै LMAO अझै पनि पुल YouTube भिडियो lol को सीएस सी-130 अर्को कथा छ भनेर कण्ठ मिल्यो कुरा lol छ
निम्न प्रयोगकर्ता (हरू) धन्यवाद भन्नुभयो: FCAIR